Tsy mahagaga raha milaza izy ireo fa ny zava-baovao rehetra dia efa antitra efa hadino. Ary indrindra ireo teny ireo dia manoritsoritra ny fironan'ny lamaody amin'ny vanim-potoana vaovao. Noho izany, maro kokoa ny vehivavy lamaody naniry ny boots. Misaotra noho ny fisainan'ireo mpanamboatra ny kiraro toy izany, manana karazana, karazana, loko sy loko isan-karazany, fa ny malaza indrindra dia ny fahatsapana fotsy. Ny mpanamboatra azy dia manamboatra appliques isan-karazany, felam-batana, embroidery, kavina tsara tarehy ary naingony mihitsy aza.
Ny fomban'ny fomba
Ny vehivavy tsirairay dia mifidy modely ho an'io akanjo io, mifantoka amin'ny faniriana sy ny filany. Ohatra, ny valenki-kiraro maingoka mitaingina lava na saha lavalava dia mifanaraka amin'ny tanàna. Ao an-tampon'ilay vokatra dia azo amboarina amin'ny rivotra marevaka, amin'ny farany amin'ny tarika rubber mafy. Hiaro amin'ny fampidirana ny rivotra mangatsiaka na ny lanezy izany. Ho an'ny fivoahana ao amin'ny fahazavana sy fialamboly hafa, ny fahatsapan'ny fotsy hoditra amin'ny hatsembohana mahafinaritra amin'ny endriky ny voninkazo sy ny vorona afo dia tena ilaina. Nefa ny endriky ny endrika skandinaviana dia hampiseho ny fahatsapana ny fialan-tsasatra ho avy.
Ho an'ny vehivavy lamaody, mazava ho azy, dia ho tia ny kiraro fotsifotsy, antsasak'izay boots, voaravaka amin'ny lokon'ny fahatsapana . Noho ny bootleg iray lehibe ao anaty kiraro, azonao atao ny mamerina ny pataloha, raha mamela ny endriny feno ho an'ny olona rehetra.
Azo atao amin'ny fotoana manokana i Valenki ary amin'ny fotoana manokana. Noho izany, ilay tovovavy dia tsy hanantitrantitra fotsiny ny tsirony mahavariana, fa koa mamorona sary tsy manam-paharoa sy mampiavaka. Ohatra, ny fahatsapana fotsy fotsy dia tena tsara ho an'ny ampakarina manakaiky ny fampakaram-bady. Ny fo, ny dantelina, ny vato samihafa, ny kavina na ny embroidery tany am-boalohany dia mety ho toy ny fanorenana. Amin'ny kiraro toy izany dia hahatsapa manokana ny ampakarina, ary ny tena zava-dehibe dia tsy hangetaheta, na dia mangatsiaka be aza ny arabe.
Ahoana no ahafahako manadio volo fotsy?
Toy ny zavatra fotsy rehetra, ny fahatsapana boots dia mitaky fikarakarana manokana. Tokony ho maina ny kiraro hatsikana, ary avy eo dia nesorina tamin'ny borosy mafy ny vovoka sy ny vovoka. Amin'ny toe-javatra sasany, dia azo atao ny mampihatra kapoaka madio. Raha matevina ny kiraro, dia azo sasana amin'ny fomba malemy izy io. Ny fahatsapana ny fahatsapana fa ny boots dia atolotra ho azy, avy lavitra ny fitaovana fanamainana.
Vehivavy vavy tsotra dia nitarina tamin'ny pataloha ambany
Akanjo fitondra amin'ny vehivavy bevohoka
Ahoana no fomba ampiharana ny lakandrana araka ny tokony ho izy?
Stylisy kanto 2015
Alisa's syndrome any Wonderland
Kiraro matevina ambony
Ny nofon'ilay zaza vao teraka
Lanvin vaovao vaovao vaovao 2015